बार्सिलोना । ‘म अहिले ठिक छु । सबैको कुशलताको कामना गर्दै सजग रहन अनुरोध गर्दछु । जीवनको जन्मपश्चात मृत्यु शाश्वत सत्य हो । तर, त्यो सत्यको विरोधमा हामी संघर्षशील रहिरहन्छौं ।
सायद यही नै जीवनप्रतिको मोह हो ।’ कोरोना संक्रमण भएपछि दुईहप्ताको कष्टकर अस्पताल बसाइँबाट शनिबार घर फर्किएका स्पेन निवासी नेपाली विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका वाक्यहरु हुन् यी । स्पेनको बार्सिलोनामा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि परिवारसहित बस्दै आएका रिजालको मूल घर नेपालको अर्घाखाँची हो । उनलाई १० दिनसम्म सघन कक्षमा राखेर उपचार गरियो ।
उनको होस गुम्यो । डाक्टरहरुले पनि बचाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने ठाने । अन्ततः विष्णुले कोरोनाविरुद्धको लडाइँलाई जितेरै छाडे । र, समुदायकै मनोबल उच्च पार्ने गरी आशाको दियो बालेर झुल्किए । अहिले बार्सिलोनास्थित आफ्नै घरको आइसोलेसनमा रहेका रिजालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘डाक्टहरुले भनेअनुसार मेरो उच्च मनोबलले नै म बाँचेको हुँ । नयाँ जीवन यसैको प्रतिफल हो ।
’अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि उनै विष्णु रिजालसँग अनलाइनखबरले टेलिफोनमा गरेको कुराकानी–
डाक्टरहरुले दिसा–पिसाब लगायत सबै जाँच गरे । सामान्य औषधि सुरु भयो । गर्दागर्दै मलाई स्लाइन चढाउन सुरु गरे । राति ३ बजे अर्को अस्पतालमा लगियो । अर्को दिनको साँझ मात्रै मलाई डाक्टरले सोधेँ- तपाईं के भएको छ, थाहा छ ? मैले थाहा छैन भनेँ । खासै कोरोनाको संक्रमण नदेखिए पनि निमोनिया देखिएको छ, भन्यो । त्यहाँबाट फेरि अर्को अस्पतालमा लगियो । त्यसपछि के-के भयो मलाई केही थाहा छैन। अर्को अस्पताल गएको पनि थाहा छैन, आएको पनि थाहा छैन । हिसाब गर्दा त १४ दिनपछि पो घरमा फर्किएको रहेछु ।
अक्सिजन दिएर, पाइपबाट नै खानाहरु दिएर राखिएको रहेछ। निमोनियाका कारणले अवस्था निकै नाजुक थियो । मेरो जीवन ठूलो खतराबाट जोगिएको रहेछ । पाँचौं दिनमा मलाई डाक्टरले उठाएको थियो रे । घर फर्कनुअघि बल्ल वृत्तान्त बताए । डाक्टरले सोधेछन्– तेरो अवस्था नाजुक छ, के गर्ने भनेर । मैले अर्धचेतमै भनेछु, ‘मैले दुईवटा छोराछोरी १४–१५ वर्षका भए । म ४/५ वर्ष जसरी पनि बाँच्नैपर्छ । उनीहरुलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउनुपर्छ भनेँ रे । मलाई जसरी पनि ठिक गर भन्दै उनीहरुलाई खाना खुवाउने इन्भिटेसन पनि दिएँ रे । डाक्टरहरुले भन्दै थिए, ‘विष्णु, त्यस दिनदेखि नै हामीले तेरो उच्च मनोबल देखेका थियौ‌ं‌ । यो नयाँ जीवन त्यसैको प्रतिफल हो । त्यसैले आइसोलेसनका लागि पनि होटलमा पठाउँदैनौं, घरमा नै जाने सुझाव दिन्छौं ।’
नेपालमा एकजना कोरोना संक्रमित भेटिएदेखि नै आतंक छ । तपाईंले त कोरोनालाई जितेर फर्किनु भएको छ । कस्तो लागेको छ ? डाक्टरले भनेजस्तै म आफ्नै उच्च मनोबलले बाँचेको हुँ । नयाँ जीवन पाएको छु । कोरोनाबाट जो कोही पनि संक्रमित हुनसक्छ । विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु संक्रमित भएको सुनेँ । उनीहरुले पनि आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गरेका रहेछन् । यो लुकाउने रोग नै होइन । सही जानकारी दिन सकेमात्र धेरैको जीवन बचाउन सकिन्छ ।
यसलाई कोरोना लाग्यो भनेर आतंकित हुन जरुरी छैन । बरु आफ्नो सावधानीलाई उच्च पारौं । जोखिम हुने कुनैपनि अवस्थासँग सम्झौता नगरौं । मैले पनि सावधानी गरेकै हुँ। तर, गर्दागर्दै पनि भयो । अरुका कारणले पनि हुनसक्छ । तसर्थ, प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार बनेन भने पनि नियन्त्रण हुनसक्दैन । अर्को कुरा, सोच पनि सकारात्मक हुनुपर्यो नि । बिरामीलाई मनोबल र हौसला दिनुपर्यो नि ।
त्यसमा पनि मलाई कोभिड–१९ भयो भनेर समाजलाई लुकाउन जरुरी छैन । अरुले के भन्लान् भन्न जरुरी छैन । स्पेनमा बस्दै आएका नेपाली समुदायमा ५/६ जना शंकास्पद देखिएका छन् रे । कतिपयले आफू संक्रमित भएको कुरा अरुलाई भन्दैनन् रे । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? मलाई त्यस्तो भयो भन्ने थाहा पाएपछि हामी पनि आइसोलेसनमा छौं भन्दै थुप्रैले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो । उहाँहरुलाई म केही पनि भन्दिनँ । तर, नेपाली समाजको मनोबल उच्च बनाउन आफ्नोबारे बताइदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिन्छु । आफूलाई सार्वजनिक गर्नै नसके पनि संक्रमित हुनुपूर्व भेटघाट गरेका साथीभाइहरुलाई तत्काल खबर गरिदिनुपर्छ ।
उहाँहरुको उच्च मनोवल बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई कत्ति पनि हिनताबोध नहोस् । मलाई कोरोना भयो, भने समाजले के भन्ला भन्ने होइन । बरु आफ्नो बारेमा साथीभाइ इष्टमित्रहरुलाई जानकारी दिएर तपाईंहरु पनि मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो भने स्वास्थ्य जाँच गराउनूस् भनेर भन्नुपर्छ । दुःखमा परेकाहरुलाई सुरक्षाको उपाय अपनाउँदै सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तो-मेरो उदाहरण दिउँ, तीन हप्तादेखि लकडाउनको अवस्था छ ।
सार्वजनिक यातायातका साधन कम चलेका थिए । एम्बुलेन्सको सेवा पाउन निकै गाह्रो थियो । घर फर्काउन पनि चुनौती थियो। हप्तौंदेखि सबैजना घरभित्रै छन् । बाहिर निस्कँदा सबैले जोखिम नै ठान्दछन् । तर, कास्की मूल घर भएका सन्दीप मोहन भट्टराई मलाई लिन गाडी नै लिएर अस्पतालसम्म आउनुभयो । साथीभाइलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगरे कहिले गर्ने भनेर आफू पूर्ण सुरक्षित रहेर मलाई सहयोग गर्नुभयो । अर्को कुरा, कोरोना लाग्दैमा डराउनुपर्दैन । विश्वभर धेरै मानिसहरु कोरोना लागेपछि पनि बाँचेका छन् । मृत्यु हुनेभन्दा उपचारपछि निको हुने बिरामीहरु धेरै छन् । त्यसैले नआत्तिऔं । सकारात्मक सोच राख्ने बानी बसालौं र मनोबल उच्च राखौं भन्न चाहन्छु ।
जीवनको जन्मपश्चात् मृत्यु साश्वत सत्य हो । तर, त्यो सत्यको विरोधमा हामी संघर्षशील रहिरहन्छौं । सायद यही नै जीवनप्रतिको मोह हो । लगभग म मृत घोषित बिरामी जस्तै थिएँ । साथीभाइसँग भएका वैमनस्यतादेखि लिएर सबै कुरा भुलिँदोरहेछ । मेरो उद्देश्यप्रति समर्पित भएर आफू बाँच्नैपर्छ भनेर आफैंसँग संघर्ष गरेँ । त्यही मनोबलले मलाई नयाँ जीवन दियो । अनलाइन खबर बाट जस्ताको तस्तै साभार गरिएको समाचार हो